October 2011 ~ Rohingya Blogger
စောင့်မျှော်နေပါတယ် by လူထုစိန်ဝင်း
Written by လူထုစိန်ဝင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို မထောက်ခံသေးဘူး၊ စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ရေးလိုက်တဲ့စာ ဂျာနယ်တွေထဲပါလာတဲ့မနက်ပိုင်းမှာတင် စာဖတ်ပရိသတ်အတော်များများဆီက ဖုန်းတွေလက်ခံရရှိတယ်။ အားလုံးက အားမလိုအားမရဖြစ်လို့ ဆက်ကြတာ။
မျက်မှန်စိမ်းကြီး ချွတ်လိုက်ပါတော့လို့ ပြောသူတွေလည်း အမြဲတမ်း ဆန့်ကျင်ခဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ ကလောင်က ကြိုဆိုတယ်၊ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ မထွက်စဖူးထွက်လာတာကို ကြည့်ပြီး ကျေနပ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ထောက်ခံတယ်လို့ အပြတ်ပြောဖို့အတွက် အပြောင်းအလဲတွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ မြန်မြန် ပေါ်ထွက်လာစေချင်ပါပြီဗျာ . . . နောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ချက်
ပယ်ဖျက်လိုက်အဲဒီသတင်းကို ဂျာနယ်တွေက ထင်မြင်ချက်တွေပါ တောင်းခံပြီး ထည့်လိုက်တယ်။ ထင်မြင်ချက်ပေးသူအားလုံးက သမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံတွေကို ထိန်းသိမ်းထားသင့်ကြောင်း ပြောကြတယ်။ နောက်တစ်ပတ် ဂျာနယ်ထွက်ရက်ရောက်တော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ဟိုတယ်အ ဖြစ် ငှားရမ်းမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ လွှဲပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းပါလာတယ်။ ဂျာနယ်မှာပါလာပြီး ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာတာ ဘယ်လောက်မြန်လိုက်သလဲ။ ဂျာနယ်တွေမှာသာ ဒီ သတင်းထည့်ခွင့်မပေးခဲ့ရင် ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ လုပ်ကြံခဲ့ရတဲ့ အခန်းတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေ အရက်မူးပြီး ကဆုန်ပေါက်ကခုန်နေကြတဲ့ ကပွဲခန်းမ ကြီးဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာ။ လွှတ်တော်ခန်းမကြီးတွေကလည်း မီးဖိုခန်းဖြစ်သွားမလား၊ သန့်စင်ခန်းဖြစ်သွားမလား မသိနိုင်ပါဘူး။ ဂျာနယ်တွေကျေးဇူးကြောင့် မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို အချိန်မီ တားနိုင်လိုက်တယ်။ သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်။
Credit : weekly media
Harn Yawnghwe winds up "fruitful" tour of home country
He regarded his 8-day visit to Burma, 20-28 October, asafruitful eye-opener, said Harn Yawnghwe, director of Brussels-based Euro-Burma Office (EBO) and youngest son of the late first President of Burma who went into exile with his mother in 1963. Harn Yawnghwe with his daughter arriving in Rangoon The only problem he faced was when he applied for his visa. Despite being invited by three ministers, he was technically stillapersona non grata, the embassy told him. It was finally issued, only after he had put downaminister's name as his guarantor.
If there were any more misgivings, he was discouraged from them when he arrived there. There were only two fixed items on his agenda: To visit his hometown Yawnghwe, once the seat of one of the most powerful Shan princedoms, and Rangoon, where he went to school. But it turned out most of his time there were filled up byaflurry of meetings with 12 political parties andanumber of high ranking regime officials. "I didn't meet anybody saying anything negative about what's taking place in Burma," he remembered. One senior police officer: This is just what we've been waiting for so long.An Inlay shopkeeper: Since you are back after all these years, things must be moving for the better for our country.A Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) leading member: Since the Union Solidarity and Development Party (USDP) is made up of all national races, including Shans, cooperation is better than expected earlier.
Apart from the SNDP, he also held meetings with5democracy parties, remaining4Nationalities Brotherhood parties and the deregistered Shan Nationalities League for Democracy (SNLD). "All seemed to be saying three things to me: The government under U Thein Sein leadership is really working for changeChange won't come easy. Old systems and laws are still in place. It'll take some time before new systems and laws can move in. The new labor act, for instance, came into being because of the assistance by the ILO. It means exiles can take part in drafting new laws. And it should not be considered as propping up the old regime, but as help strengthening democracy in the country.Support and encouragement therefore are needed to make the changes in the making irreversible"
He earlier told Financial Times, "They have decided to change. It's not what we called for, but there are changes. Even if they are pretending to change, we should push them so the change becomes irreversible." The NLD
His argument found an ally at least in the National League for Democracy's U Win Tin. "Our line of thinking does not differ from yours," Harn was told. "Unfortunately, I didn't get the chance to meet The Lady, despite tireless efforts made by one of her close associates," he said. He declined to name the said close associate, but said he is one of her intimates who still carries deep mistrust of Thein Sein. "She told me I need to have trust in him," he said to Harn. The ruling class
Without doubt, the country's top leadership is made up of two factions, divided by conflicting personal feelings and ways of thinking, according to him: The Gang of Four:
Vice President #1 Tin Aung Myint Oo Upper House Speaker Khin Aung MyintInformation Minister Kyaw HsanFinance Minister Hla Tun
"They have reportedly urged the Senior General (Than Shwe) to stageacomeback, but unless Thein Sein makesabig blunder thereby giving him sufficient excuse, it is unlikely he will return", he reasoned. The "Reformists":
President Thein Sein Lower House Speaker Thura Shwe MannRailway Transport Minister Aung MinIndustry #1 Minister Soe Thein(and surprise, surprise) Electric Power Minister Zaw Min(whose declaration "not to back off" from the Myitsone project had triggeredaseries of popular actions culminating in its suspension)
"However, the fence sitters are still the majority in the top echelon, I was told," he said. "They are naturally waiting to see which direction the wind is blowing before they make up their minds." Peace talks
Negotiations forarenewed ceasefire are conducted byateam led by U Aung Thaung, USDP Secretary #1 and U Thein Zaw, Chairman of Lower House National Races Affairs and Internal Peace making committee, on the Sino-Burmese front. It has notable but not surprising success with the Wa and Mongla groups, but "nothing but love" with the Kachins. Despite negotiations since June, war between the two has intensified much to the chagrin of the local populace. "An alternative for the Kachin Independence Organization (KIO), if it is not held up by the United Nationalities Federal Council (UNFC) the alliance of which it is the leading member, is to propose to Naypyitaw for an appointment ofanew negotiating team," said Harn. Coincidentally, on the Thailand-Burma side, another team led by U Aung Min had been seeking out appointments with the armed groups along the border. It had already met the Karen National Union on9October 2011, though details have yet to be disclosed. A source said the Karens were impressed with Aung Min who used to serve on the Karen front. Harn Yawnghwe, while in Rangoon on Thursday, 27 October, told the5democracy parties "he would try to help in making peace in ethnic areas," reported Mizzima News quoting Nayyi Ba Swe, daughter of former prime minister U Ba Swe. "I was asked (byaregime official) what I thought of about its 'group-by-group' approach, shunning the UNFC approach," Harn recalled. "I told them at the initial level which is for conclusion of ceasefire agreements, it should be okay to deal groupwise. But when it comes to political negotiations, all stakeholders should be invited." He said he had also urged the government to release the political prisoners as soon as possible, so to dispel the lingering doubts, if nothing else. Other opposition movements meanwhile are makinga3 point call: Release of all political prisoners, nationwide ceasefire and inclusive dialogue.
Credit : Shanland
ဦးဟန်ညောင်ဝေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သမ္မတကြီးလည်းဖြစ်၊ ညောင်ရွှေ စော်ဘွားဆက်၏ နောက်ဆုံး စော်ဘွားလည်းဖြစ်သော စော်ဘွားကြီးစပ်ရွှေသိုက်၏ သားတဦးဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာပြီး ၄ လ အကြာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဦးဟန်ညောင်ဝေကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ အခြေခံပညာရေးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင် ပညာ ဆက်လက်ဆည်းပူးကာ ဘွဲ့ရရှိသည်။ ထို့နောက် ကနေဒါနိုင်ငံ McGill University မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ (MBA) ကို ရရှိခဲ့သည်။ဦးဟန်ညောင်ဝေ (ဓာတ်ပုံ - Shan Herald Agency for News)ဦးဟန်ညောင်ဝေသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာပင် ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ သူသည် Burma Alert လစဉ်သတင်းစာစောင်၏ အယ်ဒီတာ၊ အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ၀န်ကြီးချုပ် ဦးစိန်ဝင်း၏ အကြံပေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ နေ့စဉ် မြန်မာဘာသာအပြင် တိုင်းရင်းသား (၇) ဘာသာဖြင့် သတင်းထုတ်လွှင့်နေသော ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) ၏ စီမံခန့်ခွဲရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး စသည့် တာဝန်များ ယူခဲ့သည်။
မေး ။ ။ ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ဦးဟန်ညောင်ဝေအနေနဲ့ မြင်တွေ့လိုပါသလဲ။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရော အခုအချိန်မှာ ဘယ်လို အသေးစိတ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ဖြေ ။ ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တော်တော်များများကိုတော့ လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပြုထားပြီးပါပြီ။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကတော့ တော့်တော့်ကို ရှုပ်ထွေးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီကိစ္စတွေက တခုနဲ့တခု ဆက်စပ်နေလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက် ကျနော်တို့ မျက်နှာလွဲခဲပစ်လုပ်ထားတဲ့၊ ပိုဆိုးလာနေတဲ့ ပြဿနာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်ထင်တာကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ကတိအသစ်တွေ ထပ်ပေးနေမယ့်အစား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပေးပြီးသားကတိတွေကိုပဲ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲက ဘာလဲဆိုတော့ အစိုးရမှာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လုပ်နိုင်စွမ်းအား မရှိနိုင်တာပဲ။ အစိုးရလုပ်နိုင်တာထက် ပိုပြီး မျှော်မှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေက ပိုပြီးတော့ လက်တွေ့နဲ့ ကင်းကွာသွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ဖျက်သိမ်းပစ်တာမျိုး၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကြေညာတာမျိုး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတာမျိုး၊ ပြည်ပက အတိုက်အခံတွေ ပြည်တွင်းပြန်လာနိုင်အောင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတချို့ ချပေးတာမျိုး၊ စာပေစိစစ်ရေး ဥပဒေတွေကို ဖျက်သိမ်းပေးတာမျိုး၊ သတင်းထောက်တွေအတွက် လွတ်လပ်ခွင့် ပိုပေးတာမျိုးအပြင် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေကို ၀င်ခွင့်ပြုတာမျိုးတွေက ရှိနေပြီးသား ဗျူရိုကရေစီကို ထပ်ပြီး အလုပ်မရှုပ်စေတဲ့ ပြုလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေပါ။
မေး ။ ။ အရင်တုန်းက ဦးဟန်ညောင်ဝေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှု မူဝါဒကို ထောက်ခံပါတယ်။ အခုတော့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးဘက်ကို ပိုပြီး ထောက်ခံနေပုံပေါက်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ပြောင်းလဲသွားရတာပါလဲ။ဖြေ ။ ။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအကြောင်း ဆွေးနွေးရင် လူတွေမှာ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပါလာတတ်တယ်။ အမှားလုပ်တဲ့ လူတွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့် ပြုသင့်သလား၊ အပြစ်ပေးသင့်သလားဆိုပြီး ဆွေးနွေးငြင်းခုံပွဲ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့အတွက် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဆိုတာ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းနှစ် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျနော်တို့ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ – NCGUB၊ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ – NCUB၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ – NLD-LA စသဖြင့်ပေါ့) ဆွေးနွေးတုန်းက ပိတ်ဆို့မှုကို နိုင်ငံရေးလက်နက်တခုအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ တော်တော်များများကလည်း နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မေးစရာရှိတာက အဲဒီရည်မှန်းချက်ကရော အောင်မြင်ခဲ့လားပေါ့။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဆက်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့။ ပိတ်ဆို့မှုကို ကျနော်တို့ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်အစိုးရကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စကားပြောစေချင်လို့ပါ။ အပေးအယူတခုတော့ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေလည်း ပြန်လည်ရရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ အဓိကကတော့ စစ်ရေး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှု (ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး) မလုပ်လို့ကတော့ စစ်တပ်ကို အပေးအယူစားပွဲဆီ ရောက်လာဖို့ ဘယ်တော့မှ လုံလောက်တဲ့ဖိအား ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ထပ်ချမယ်ဆိုရင် အပေါက်ပေါက်နေတဲ့ ပူဖေါင်းကို လေဖြည့်နေသလိုပဲ၊ ဘယ်တော့မှ ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ကျေနပ်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
မေး ။ ။ မကြာသေးမီက မြန်မာအစိုးရချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အခုလက်ရှိအစိုးရဟာ အရင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ ဖွယ်ခွာလာပြီလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု အရေးမှာတော့ တိုးတက်လာတာ ကျနော်တို့ ဘာကြောင့်မတွေ့ရသေးတာလဲ။ မြန်မာပြည် အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အုပ်စုတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကလည်း ဆက်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စ သေသေချာချာ ဖြေရှင်းပြီးတဲ့အချိန်အထိ အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ နေပြည်တော်ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွ တုန့်ပြန်တာက ပိုသင့်လျော်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်နဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့စည်းပေးရေး တောင်းဆိုမှုတွေအပေါ်မှာ ဦးဟန်ညောင်ဝေ ဘယ်လို တုန့်ပြန်ချင်ပါသလဲ။ဖြေ ။ ။ ဘာကြောင့် မတိုးတက်သေးသလဲဆိုတာက ဒီပြဿနာတွေဟာ ပိုပြီးနက်နဲတယ်၊ လူတွေ မျှော်လင့်ထားတာထက် အားတွေပိုစိုက်ဖို့လိုတယ်၊ အချိန်ပိုယူဖို့လိုတာကြောင့်ပါ။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေ၊ ဒုက္ခခံစားမှုတွေ ကျော်လွန်ဖို့ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ချမှုတွေ တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အစိုးရစစ်သားတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ဥပေဒအရ ကင်းလွတ်ခွင့်အပြည့်နဲ့ ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ရိုးရိုးသားသား အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို လွှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြန်လည်ကုစားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို သူတို့အနေနဲ့ ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးသွားနိုင်မှာပါ။ နေပြည်တော်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးပါ။ မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စကို ဦးသိန်းစိန် လုပ်သလိုမျိုး သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်မယ်ဆို ပိုပြီးထိရောက်မှာပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒါမှမဟုတ် တခြားနိုင်ငံခြား အစိုးရတွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာထက် သူ့တို့ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်တာက ပိုပြီးထိရောက်မှာပါ။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းအနေနဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးကို ညှိနှိုင်းဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့နေရာမှာ၊ ပြီးတော့ စစ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို စွန့်ခွာတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးအတွက် နည်းပညာအကူအညီနဲ့ အထောက်အပံ့တွေ ပံ့ပိုးတဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဆိုတာ ဖြစ်လာမယ့်ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုကာလက ကျနော်တို့အနေနဲ့ သီအိုရီ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေဆိုတာထက် လက်တွေ့ကျတဲ့ အဆင့်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
Credit: Irrawaddy News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံ (Video)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် ဒီကနေ့ နေ့လယ် ၁း၀၀ ကနေ ၁း၅၅ အထိ စိမ်းလဲ့ကန်သာ အစိုးရဧည့်ဂေဟာမှာ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည်များ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် အတွက် လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့် ရရှိရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ ငွေကြေး လည်ပတ် သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေး၏ အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အမြင်ချင်း ညီညီညွတ်ညွတ် ဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေအနေများနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့်သူများ ကိစ္စတို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Credit : Burma VJ Media Network
Daw Aung San Suu Kyi's view on Rohingya
Aung San Suu Kyi, Rohingya
Another e-mail from Shaik Ubaid, New York, USA:
I amaphysician andahuman rights activist. I am greatly concerned about the persecution and ethnic cleansing of Rohingiya Muslims of Arakan. Does your vision includeapluralistic Burma with equal rights for all, including religious minorities?
Democracy does mean pluralism and democracy means equal basic human rights for everybody. I am confident that we can build upareally strong and united Burma. The signs are all here. In some ways, the sufferings we have undergone together have built upatremendous feeling of trust among each other. Our sufferings have united us. I think the world has opened up in suchaway that different cultures are able to reach across to each other. We all live in the same country - we have lived in the same country for centuries and because we have lived together so closely, we have had our problems. You have more problems with your neighbours than with people who live very far away from you - that's only natural. But I think we can also learn to be very, very good neighbours in the same way because we all live in this country we can learn to be very good and loving towards each other. We can learn to trust each other, we can learn to work together, we can learn to live together and I think that learning process has already begun. Source :http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/talking_point/aung_san/html/transcript.stm
More than 40% of people living in Burma belong to one of the military-ruled nation's different minority groups. The government recognises eight distinct ethnic groups, with dozens of sub-groups, but refuses to acknowledge others.As the country holds its first elections in 20 years, the BBC profiles some of the main minority groups. Click on each image to find out more.Continue reading the main story
Credit : BBC Read More
Statement by U.S Ambassador Ronald Goddard, at the 66th UN General Assembly
Statement by Ambassador Ronald Goddard, at the 66th UN General Assembly - Third Committee Item 69 (b) and (c) - Promotion and Protection of Human Rights, October 26, 2011 Ambassador Ronald Goddard New York, NY October 26, 2011
AS DELIVERED Thank you, Mr. President. Last year, the United States joined over 60 other governments to establish through the Human Rights Council the mandate for the Special Rapporteur for the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and of Association. These freedoms have always been central to healthy civil society and to the democratic process. New technologies such as the Internet and mobile phone networks help people to assemble and associate, both in person and online, and have become important tools for the exercise of these universal human rights. Unfortunately, some countries continue to deny their citizens these rights, both in the streets and online. Syria has responded with violence to its citizens’ efforts to peacefully assemble and protest for their universal rights. The Asad regime has now reportedly killed more than 3,000 civilians and has arrested and detained roughly 30,000 individuals since protests began seven months ago. Activists report the government is increasingly targeting doctors and pharmacists for treating injured protestors and over 250 medical personnel have allegedly been arrested since the start of the unrest. Regime forces are responsible for mass arrests, torture, targeted killings, and arbitrary executions and detentions, including those aimed at young children - actions the UN High Commissioner for Human Rights has said may amount to crimes against humanity. Despite the Asad regime’s rhetoric of reform and dialogue,anumber of people have been killed by Syrian security forces while in custody, including human rights activist Ghiyath Mattar, who was courageously committed to confronting the regime's despicable violence with peaceful protest. Iran, through its security services, continues to quash freedom of assembly. The regime repressed all forms of opposition, precluding accountability of its actions to its own citizens. It harassed, abused, intimidated, detained and sentenced human rights defenders, civil society actors, student activists, artists, and thousands of individuals without cause or due process of law, including political leaders Mir Houseein Mousavi and Mehdi Karroubi and their wives. It jailed journalists, prosecuted human rights attorneys, executed political prisoners, and continues to hold more than 100 juveniles on death row, in contravention of the UN conventions to which it isaparty. Iran has extended the repression to the exercise of rights online: it blocks access to thousands of websites, jails opposition bloggers, and monitors individuals’ private Internet communications to collect information to support interrogations and fabricate criminal charges. Iran continued to abuse members of ethnic and religious minorities, repressing their practice of faith, denying them their right to equal treatment, and sentencing some to death for their religious beliefs, such as Pastor Nadarkhani. One hundred members of the Baha’i community are currently in jail, along with many others of oppressed religious sects. Burma subjects members of ethnic and religious minorities, particularly the Muslim Rohingya, to unique discrimination. While we welcome the recent release of some political prisoners, the government continues to holdahigh number of others who should also be released, and ongoing attacks against ethnic minority populations have resulted in the displacement of thousands of Burmese in Burma, along its borders, and in the region over the past five decades. The Burmese government targets political activists and censors the media. Internet users face up to 15 years imprisonment for sending or receiving some types of messages, such as those deemed damaging to the national culture. Burma is currently moving forward with labor law reform, which we hope will comply with ILO standards, but it continues to jail trade unionists for trying to organize and advance worker rights. The Democratic People’s Republic of Korea maintains draconian controls over almost all aspects of citizens’ lives. It denies citizens the freedoms of religion, expression, assembly, association and movement and fails to respect worker’s rights. It severely restricts the flow of independent information into, out of, and within the country, including on the Internet. The tight controls on access to information and restrictions on freedom of movement make it unlikely and difficult for North Koreans to form associations or assemble in an organized fashion. In Cuba, we note with sadness the passing of Laura Pollan, founder of the Damas de Blanco who continue to fight for not only the right to peacefully assemble, but for the rights and freedom of political prisoners. The Cuban authorities actively target the Damas for harassment, prevent free assembly of the Damas and other groups through house detention without due process, and employ mobs that frequently use violence to disrupt peaceful demonstrations. Earlier this year, the regime reacted with increased harassment and violence as the Damas sought to expand their movement. We also note with sadness the continued incarceration in Cuba of Alan Gross,a62-year-old American, who has been unjustly imprisoned for over 22 months for helping improve the internet connectivity and facilitate the free flow of information to, from and among the Cuban people. Cuba has kept this innocent man in jail despite his own fragile health and that ofadaughter suffering from cancer. We call for the immediate and unconditional release of Alan Gross. Finally, before closing, Mr. President, while we welcome China’s increasingly important role on the world stage, we note that China harasses and detains its citizens expressing dissenting viewpoints both individually and collectively, labeling them as dangers to state security or even as terrorists. It has imprisoned Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo, who helped draft and organize signatures for Charter 08 which peacefully advocated for reforms. It blocks many social networking sites and Internet searches of subjects deemed sensitive, and detains citizens for posting content that the government finds objectionable. Civil society organizations operate only under tight controls. Workers cannot form independent unions. Unregistered religious groups cannot gather together to worship as they see fit. Authorities detained leaders of the Shouwang Church in Beijing when their congregation resorted to outdoor meetings. They maintain restrictive policies that threaten the unique religious, cultural and linguistic identity of Tibetans. The government also strictly regulates religious activities of Uighur Muslims in Xinjiang, including making it impossible for some to travel for the Hajj. And new regulations dramatically expand government control over religious life and practice. Mr. President, the United States hopes that the work done here at the United Nations will help human rights defenders across the globe know that we stand with them. Thank you.
Credit : US of UN
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီးသော နောက်ပိုင်းမှစ၍ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ချမှတ်ခဲ့သော လမ်းစဉ်များကိုနိုင်ငံရေးသမားများ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ သည် မိမိတို့လိုသလိုသာအသုံးချခဲ့ကြပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် ယနေ့အထိတိုင်အောင်တိုင်းသူပြည်သားများကိုဓါးစာခံအဖြစ်အသုံးချနေဆဲဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့ကလွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကမ္ဘာကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာ ပြောခဲ့သလိုဆိုမာလီပင်လယ်ဓါးမြများကဲ့သို့အစိုးရသည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုပြန်ပေးဆွဲထားပြီး သူတို့လိုချင်တာကိုရမှ လိုသလောက်သူတို့အိပ် ကပ်ထဲကထုတ်ပေးနေတာကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူအနေဖြင့်၁၉၈၈ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒပြပွဲနောက်ပိုင်းတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၏ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်များကိုလေ့လာတင်ပြလိုပါသည်။ ၈၈၈၈ လေးလုံးအရေးခင်းကို စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းစဉ် ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုပေးပြီး တပ်မတော်သည်စစ်တန်းလျားပြန်မည်ဟူသော ကြေငြာချက်ဖြင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ နှင့် ပြည်သူပြည်သားများကို ချွေးသိပ်စေခဲ့ပြီး နဝတ သည် အကြမ်း အနုနည်းများကိုသုံး၍ ဖြိုခွဲခဲ့ပါသည်။
တစ်ဘက်မှ မက်လုံးပေးသောစကားကိုသုံးပြီးအခြားတစ်ဘက်တွင် လည်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ သဘောထားပြင်းထန်သောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီး အကျဉ်းထောင်များအတွင်းထည့်ခဲ့ကြရပါသည်။ နောက်ဆုံး ဒီမိုကရေစီခေါင်ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုပါဖမ်းဆီးပြီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ခုနှစ် ကာလများအတွင်း ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့ပြီး အေ အဆင့်ကို ထောင်အနှစ် ၂၀ နှစ် ၊ ဘီ အဆင့်ကို ထောင်အနှစ် ၇ နှစ် မှ ၁၀ နှစ် ၊ စီ အဆင့်ကို ထောင်အနှစ် ၃ နှစ် မှ ၅ နှစ် သတ်မှတ်ပေးပြီး ထောင်ချခိုင်းခဲ့ပါသည်။ အထက်ပါချိန်ကာလလောက် ကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ သည်စစ်အာဏာာရှင်ကြီးများ၏ လိုသလိုအသုံးချခံရမည့် ဓါးစာခံ များဖြစ်လာရပါသည်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့အနေဖြင့် အကျဉ်းသား နိုင်ငံရေးသမားတို့ကို လစဉ်ပုံမှန်တွေ့ဆုံပြီး စစ်တပ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ခံရန် မက်လုံးပေးပြီးစည်းရုံး ခဲ့ရပါသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ နှင့်တွေ့ဆုံမှုအစီရင်ခံစာကို အထက်ဌာနများသို့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ ပုံမှန်တင်ပြခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလက ယနေ့ကဲ့သို့ နယ်အကျဉ်းထောင်များသို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကိုပို့ဆောင်ချုပ်နှောင်ခြင်းမရှိဘဲ အင်စိန်အကျဉ်းထောင်တွင်သာထားပြီး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို အထူးဆောင် နှင့် သီးသန့်ဆောင်များတွင်ထားပါသည်။ထိုစဉ်အချိန်အခါကတည်းက အမျိုးသားအရေးတွက် အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့်ကိုယ့်အကျိုးမစွန့်နိုင်သူများသည်စစ်အစိုးရကိုမချစ်သောလည်းအောင့်ကာနမ်းခဲ့ကြရပါသည်။ ဒေါင်ဒေါင် မြည်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ဦးဝင်းတင် နှင့် ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် အဖွဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များသာ တိုင်းပြည်အတွက်ဒီမိုကရေစီအရေး ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကို မပြောင်းမလဲ ယနေ့တိုင် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိအနေထားမှာပင်ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်အဖွဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ စစ်အစိုးရ၏ ဓါးစာခံများအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်နေပါသည်။
၂၀၀၀ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကာလလောက်မှစ၍စစ်အစိုးရသည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးကိုလစ်လျူရှုပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံ အရေးကိုထင်သလိုလုပ်၍မရမှန်းသိလာခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုဂုဏ်သတင်း သည်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပြီး ကုလသမဂ္ဂအပါဝင် အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ဖိအားပေးမှုကြီးထွားလာမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ဖိအားပေးမှုများအထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက် ရေးသည် အဓိကအချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ပါခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ၂၀၀၀ ခုနှစ် အတွင်း လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရသလို အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း Lobby Group ငှါး၍ အမေရိကန် အစိုးရကို ချဉ်းကပ်ခဲ့ရပါသည်။ထိုကာလအတွင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပတ်သက် ၍ထိန်းသိမ်းထားသူများပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် စစ်အစိုးရမှသဘောထားကြီးသရောင် ပြ ခဲ့ ပါသည်။အမှန်တစ်ကယ်တော့ စစ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ဘို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါလျှင်အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဟုသိရှိထား၍လည်းဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်၂၀၀၂ ခုနှစ်မေလတွင်D C I Lobby Group အစီအစဉ်ဖြင့်စစ်ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်သိန်းနှင့်မူးရစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးမှ ရဲမှူးကြီးခမ်းအောင် တို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်မြို့ကို လာရောက်ပြီးနောက် ဝါရှင်တန်မြို့ မြန်မာသံရုံးမှနေ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလွှတ်ပေးကြောင်းကို သတင်းအစောဆုံးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ရပါသည်။ ထိုစဉ်အချိန်အခါကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အချို့ကို စစ်အစိုးရအနေဖြင့် အသုံးချခဲ့သောလည်း စိတ်ရင်း စေတနာမမှန် စိတ်ကောင်းနှစ်လုံးကောင်းမရှိခဲ့၍ ဒီပဲရင်း အရေးအခင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါသည်။
၂၀၀၃ခုနှစ်ဒီပဲရင်းအရေးခင်းလူသတ်ပွဲကြီးပြီးနောက်နိုင်ငံတကာ၏ပြင်းထန်စွာရှုပ်ချမှုများနှင့်ပိတ်စို့ အရေးယူမှု များထပ်မံဖြစ်ပွါးခဲ့ပြီးနောက် တစ်ဖန် ပြန်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်။ ဝန်ကြီးတစ်ဦး ကိုခေါင်းဆောင် တာဝန်ပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စေပြီး စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး ၊ အမျိုးသားညီလာခံမူအချက်အလက်အချို့ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုရေး ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင် NLD ကိုအသိအမှတ်ပြုရေး တို့သည်အဓိကအချက်များအနေဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူးပါသည်။ ထိုစဉ်ကလည်း နာလည်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ရခဲ့ပြီးကာမှ ရက်ပိုင်းအလိုမှာ NLD အမျိုးသားညီလာခံတက်ပြီးမှ အခြေအနေကြည့်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးပြန်လွှတ်ပေးမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၏တိုက် ရိုက်ပြင်ဆင်အမိန့်ကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲပျက်ခဲ့ရဘူးပါသည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေးသည် ကိုဇာဂနာ ပြောသလို “ကိုယ့်အိပ်ထဲကပေးရတာကျနေတာဘဲ အကုန်လုံးလွှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲ” ဖြစ်နေပါသည်။ တစ်ကယ်တော့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တုံးကလိုများ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကို ဓါးစာခံအဖြစ် လုပ်နေပြီလာလို့ သံသယဝင်ခဲ့မိပါတယ်။
စာရေးသူလေ့လာကြားသိရတဲ့အတည်ပြုဆဲသတင်းတွေကိုထောက်လှမ်းရေးမှန်းခြေဆွဲကြည့်ပြီး စာဖတ်သူများ ကိုတင်ပြလိုပါသည်။ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ကိုဦးစွာရှင်းပြလိုပါသည်။ သတင်းဆိုတာ မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ တိကျသည်ဖြစ်စေ မတိကျသည်ဖြစ်စေ ခိုင်လုံသည်ဖြစ်စေ မခိုင်လုံသည်ဖြစ် စေသတင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီသတင်းကိုမှ အခြေအမြစ်ပေါင်းစုံမှ အချက်အလက်ပေါင်းစုံစုစည်းပြီး အကဲဖြတ် အနက်ကောက် သတင်းတည်ဆောက်ပြီး သတင်းအဆင့်သတ်မှတ်ရပါသည်၊ သတင်းအဆင့်သတ်မှတ်ရာမှာ လည်း သတင်းဖြစ်ပေါ်ရာအခြေအမြစ် နှင့် သတင်း၏အမှားအမှန်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ အသုံးပြုနိုင်သည့် သတင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။ စာရေးသူရရှိသည့် အတည်ပြုဆဲသတင်းတွေအရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လုပ်ကိုလုပ်မှဖြစ်မည်လို့ သဘောထားရှိထားသူတစ်ဦးပါ။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း စစ်အစိုးရကာလဆရာသမားကြီးများ နှင့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များကို အကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်သဘော ထားရှိ နေပါသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ရာမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပူးပေါင်းရေး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးရေးတို့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာ့အရေးစိတ်ဝင်စားသူများ၏ တောင်းဆိုချက် များဖြစ်၍ လိုက်လျောရမည်ကိုနားလည်သလို ၄င်းဘက်တွင်လည်း စစ်အစိုးရကာလ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခဲ့ မှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂမှ Commission of Inquiry မဖွဲ့ရေး နောက်ကြောင်းပြန်အရေးမယူရေးတို့ အပေါ်ဘယ်သူ အာမခံချက်ပေးမှာလဲဆိုတာတွေအတွက် ခေါင်းခဲနေရသည့်အချက်တစ်ချက်ရှိပါသည်။ အဲဒီကိစ္စတွေ နဲ့ ဆက် စပ်၍ တိုင်းရင်သားများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူဘို့လည်းလိုနေပါသည်။ အားလုံးကိုခြုံသုံးသပ်ရရင်တော့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်အစိုးရ ဖြစ်ဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဘို့ မဟာဗျူဟာတစ်ခုချဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောရ မှာပါ။
ပထမဦးဆုံးအကြံပေးအဖွဲ့များကို ယခင်ခေတ်ကာလများနှင့်မတူ အစိုးရ၏ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးများအဖြစ်အသုံး ပြုလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အဲဒီအထဲတွင် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်နှင့်ရင်းနှီးသူကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းပြီးချဉ်း ကပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတစ်ကာအရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက် သည့် နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့လာရောက်ခြင်းကိစ္စ ဥရောပနိုင်ငံအချို့မှအကူအညီပေးရေးကိစ္စ အာဆီယံ ကိစ္စများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကမ်းလှမ်းမှုများရှိခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနောက် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည် နှင့်တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍မကြာမှီ သမ္မတကြီးနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် အခြေအနေထိ ရောက်ခဲ့ပါ သည်။ သမ္မတဘက်မှ NLD ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီး လွှတ်တော်အတွင်းနိုင်ငံရေုးလုပ်စေလိုပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံ ဥပဒေ ကိုလေးစားစေလိုသည့် သဘောထားပြခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်မှလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်ပေးရေး ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ကိစ္စများ ထောက်ပြမှုများရှိနေပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်စုံစီမံကိန်းကိစ္စကတော့ မမျော်လင့်ဘဲပေါ်လာသောပြဿနာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မတ အနေဖြင့်အဆိုပါအခွင့်အရေးကိုအသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ မှ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက် အပေါ် ထောက်ခံမှုအများကြီးရယူသွားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အကျဉ်းသား ( ၆၀၀၀ ) ကျော်ကို လွတ် ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးမည်ဟုကြေငြာခဲ့ပါသည်။
သို့သော် နိုင်ငံရေး အရအဖမ်းခံထားရသူ (၂၀၀) ကိုသာလွှတ်ပေးခဲ့သည့် အထဲထင်ရှားသော အနုပညာသမား ကိုဇာဂနာ နှင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ ဗိုလ်ချုပ်ဆေးထင်ကိုသာလွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ တစ်ကယ့် နိုင်ငံရေး သမားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ဆက်လက်ဖမ်းထားခဲ့သည်။ ဓါးစာခံ များအဖြစ်ဖမ်းဆီး ထားသလိုဖြစ် နေပါသည်။ စာရေးသူလေ့လာသိရှိရသလောက်ကတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် NLD ထံမှတစ်စုံတစ်ခုပြန်လည် မျော်လင့်နေသည်ဟုသိရပါသည်။ NLD အနေဖြင့် ဆိုမာလီပင်လယ်ဓါးမြတွေနဲ့တူသည့် အစိုးရဆီက ဓါးစားခံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးကို အဖိုးအခဘယ်လောက်ပေးရွေးရမှာလည်းကိုစောင့်ကြည့်ရပါဦးတော့မည်။ စာရေးသူအနေဖြင့်အကြံပြုလိုသည်မှာ စစ်အစိုးရတစ်ဖြစ်လဲအရပ်သားအစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးကစားပွဲများတွင် မခံရစေရေး နည်းပရိယယ်ကြွယ်ဝစွာဖြင့် သတင်းလက်ဦးမှုရယူပြီး တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်နွဲသွားနိုင်ပါမှတော်ယုံ ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော် နှင့် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်လိုသူများအင်အားကြီးထွား လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှ စစ်ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဓါးစာခံများ အမြန် လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလျက်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လ ၁၄ ရက်
Credit : ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ် Read More
US envoy calls for prisoners' release in Myanmar
The US special envoy on Myanmar called for the release of all political prisoners as he made his second trip in as many months to the long-isolated nation, the State Department said Tuesday.
Envoy Derek Mitchell flew back to Myanmar this week after its leaders announcedaprisoner amnesty, which initially raised hopes overseas but disappointed opposition leaders who sought the release of key dissidents.
State Department spokeswoman Victoria Nuland said one reason for Mitchell's visit was to seek "a true and accurate picture of exactly who's out and who is not out" following the amnesty.
"I have zero doubt that, at every stop, he made the point that we want to see all political prisoners released," Nuland told reporters.
Human rights groups say Myanmar, earlier known as Burma, has committed widespread abuses against ethnic minorities including mass rape and has around 2,000 political prisoners.
Myanmar's military leaders handed over toanominally civilian government in March. While the opposition and the United States were skeptical about the move, some steps by new President Thein Sein have led to optimism.
The former general has opened talks with opposition icon Aung San Suu Kyi and defied China, Myanmar's closest ally, by freezing work on an unpopular dam inaborder area.
Mitchell, who was appointed in August and visited Myanmar the following month, met on his latest trip with Suu Kyi and Foreign Minister Wunna Maung Lwin. Suu Kyi's associates said she met with Mitchell for one andahalf hours.
Mitchell, speaking last week in Washington, said Myanmar was showing "encouraging signs" but its government must commit to deeper reforms and halt violence against minorities before the United States eases sanctions.
President Barack Obama's administration launched an engagement policy with Myanmar after taking office in 2009, concluding that an earlier focus on isolating the nation had failed.
Credit :Agence France-Presse
Remarks on Statelessness and Gender Discrimination By U.S.Department of State
Good morning. It’sapleasure to be here with you all today. I want to thank Refugees International for hosting this important conference, and to our hosts at the U.S. Institute of Peace. It’s an honor to be onapanel with such distinguished individuals working at every level to improve nationality rights globally. We know that as many as 12 million people around the world are not recognized as citizens by any state. They live in every region of the world, at the margins of the formal economy and political system, largely hidden without government recognition.
There are many factors that contribute to statelessness. Foremost among those factors is an issue that we’re all here to discuss today; and it’s an issue that is particularly important to both President Obama and Secretary Clinton. And that is discrimination against women. Let me start withabrief story. In Bangladesh,ateenage Rohingya (Ro-HEn-ga) girl was raped and later gave birth toamalnourished baby. The mother was born and raised inarefugee camp in Southeastern Bangladesh. Her parents fled from Burma whose 1982 Citizenship Law rendered them stateless. Without citizenship -- the Rohingya (Ro-HEn-ga) are regularly subjected to oppression and human rights abuses. No government, no country will claim them. Asaresult, the girl, her baby, and her parents faceagrim future. The baby, now two weeks old, will be the second generation of her family to grow up inarefugee camp.
This isareality for far too many people in our world. Nationality laws discriminate against women in at least 30 countries, limiting their ability to acquire, retain, and transmit citizenship to their children. In many cases, nationality laws permit only the father to transmit citizenship to his child. And in still other cases, nationality laws strip women of their citizenship upon marriage toaforeign spouse, or prohibit women’s foreign spouses from naturalization. The result is that hundreds of thousands, even millions are relegated to the shadows of society, without legal protection orasocial safety net. Stateless persons typically lack identity documentation, and cannot register births, marriages, or deaths. They often cannot work legally or travel freely. They cannot vote, openabank account, or own property, and they often lack access to health care and other public services.
There is little research on the issue of statelessness, and even less on gender discrimination in nationality laws. To try to understand the impact of statelessness better, the State Department’s Bureau of Population, Refugees, and Migration recently fundedastudy by Kingston University to examine the costs of statelessness. This study used quantitative and qualitative methods to compare the livelihoods of stateless persons with those of citizens in four countries. Among its most striking findings, the study proved that statelessness reduces household income byathird, and reduces the odds of owning one’s home by nearly 60 percent. The average education of stateless households is lower than that of citizens by at least one year and in some cases as many as six years. The study also demonstrated disadvantages for stateless persons in terms of health status, and access to justice and law enforcement. Recognizing this cycle of defeat, Secretary Clinton has identified women’s nationality rights as an important area of work for the State Department. At last month’s Asia Pacific Economic Cooperation summit on women and the economy, Secretary Clinton argued that in these times of global economic strain, we cannot afford to perpetuate the barriers facing women. She noted that, “Some [women] don’t have the power to confer citizenship on their children, so their families have less access to housing and education.”
In doing this work, our objectives are straightforward: 1. We want to use the strength of our public diplomacy to increase global awareness of women’s nationality rights. 2. And we want to persuade government officials to amend nationality laws that discriminate against women; we want to ensure universal birth registration; and we want to establish procedures and systems that help stateless people acquire citizenship. Because, at the end of the day, statelessness is not justahumanitarian or human rights issue -- it isamatter of human security and the protection of individuals. So we are working with U.S. Embassies to engage civil society groups that are advocating on behalf of stateless people. We are beginning conversations with multilateral and regional partners, especially UN agencies, about increasing their role in promoting women’s equal right to nationality. And in particular, we are encouraging UNHCR, my colleague and fellow panelist -- High Commissioner Guterres -- to elevate this issue within its work and that of other UN agencies.
Let me also say that the United States is concerned about the situation of Tibetan refugees who have lived in Nepal for over 50 years. Though this population is not stateless by law, there is nowathird generation of refugees whose status remains unresolved, many of whom who cannot own property or work in the legal economy. The Tibetan refugees should be offeredapath to registration and citizenship or other durable status. The U.S. would like to work with Nepal to resolve this protracted refugee situation. As we work with civil society, I want to applaud the efforts of my fellow panelists, Mona Kareem, Sonia Pierre, Lalia Ducos, and other activists who have continued the fight against discrimination in nationality laws around the world. Your work is critical to achieving gender equality, and I encourage civil society groups -- women’s groups, human rights organizations, democracy activists, and others -- to increase efforts to combat gender discrimination in nationality laws. We know that these are tough, often complex issues. But here today, and throughout our work around the world, we are layingastrong foundation of understanding: that nationality rights -- especially for women -- are key to countries’ democratic governance, peace and stability, and economic development.
Credit : U.S State Dept Read More
Credit by: Asian Correspondent Read More
U.S General (Ret) Wesley Clark Discussed about the Future of Burma/Myanmar
A new Asia Society Task Force Report offers recommendations on framing US policy toward Burma. Retired General Wesley Clark, Henrietta Fore, and Suzanne DiMaggio discuss the findings.
Aung San San Kyi ataRally in Chin state. Image courtesy of Burma Campaign UK
ANN ARBOR, Mich.—Aung San Suu Kyi,aBurmese human rights activist and Nobel Peace laureate, is the recipient of the 21st University of Michigan Wallenberg Medal. Inarare public address overseas, Suu Kyi will give her videotaped Wallenberg Lecture at 7:30 p.m. ET Oct. 25 before an audience in Rackham Auditorium. The lecture will be followed immediately byalive Q&A session with Suu Kyi in Burma.